Bit By Bit - Introduction - 1.4 Themes bhuku rino
Misoro miviri mubhuku iri 1) kusanganisa prammades uye kuchengetedza uye 2) maitiro.
Misoro miviri inomhanya mubhuku rino, uye ndinoda kuvasimbisa ikozvino kuitira kuti iwe uone ivo sezvavanouya kakawanda. Yokutanga inogona kufananidzwa nemufananidzo wakafananidza zvikanda zviviri: Marcel Duchamp naMichelangelo. Duchamp inonyanyozivikanwa nokuda kwevakagadzirira vake, vakadai seTsime , kwaakatora zvinhu zvakafanana uye akadzokorora zvakare semufananidzo. Michelangelo, kune rumwe rutivi, haana kudzorerazve. Apo paaida kuumba chifananidzo chaDavid, haana kutsvaga chidimbu chemarble chakange chakaita saDavid: akagara kwemakore matatu achishanda kuti aite unyanzvi hwake. Dhavhidhi haasi akagadzirira; iyo inodzivirira (mufananidzo 1.2).
Mufananidzo 1.2: Tsime raMarcel Duchamp uye David naMichaelangelo. Tsime ndiyo muenzaniso wegadzirira, apo munyanzvi anoona chimwe chinhu chiripo kare munyika uye zvinochiita kuti chigadziriswe. Dhavhidhi muenzaniso weunyanzvi hwaive hwakagadzirwa nemaune; iyo inodzivirira. Kutsvakurudza kwevanhu munharaunda yemadhigiri kunosanganisira vaviri vakagadzirira uye vanochengetedza. Mufananidzo weTsime naAlfred Stiglitz, 1917 (Chinyorwa: The Blind Man , kwete 2 / Wikimedia Commons ). Mufananidzo waDavid naJörg Bittner Unna, 2008 (Chinyorwa: _Galleria dell'Accademia, Florence / Wikimedia Commons ).
Iyi miviri miviri-readymades uye mavharopu-mapepa akajeka kune maitiro anogona kushandiswa pakutsvakurudza kwevanhu mumakore echidimbu. Sezvauchaona, mimwe mienzaniso iri mubhuku rino inosanganisira kugadzirisa kuchenjera kwemashoko makuru ezvinyorwa akave akasika nemakambani nehurumende. Mune dzimwe mimwe mienzaniso, zvisinei, muongorori akatanga nemubvunzo chaiwo uye akabva ashandisa zvishandiso zvezera re digital kuti ape ruzivo rwunoda kupindura mubvunzo iwoyo. Kana zvikaitika zvakanaka, zvose zvematambo aya zvinogona kuva zvinoshamisa zvikuru. Saka, kutsvakurudza kwevanhu munharaunda yemadhigiri kunosanganisira vaviri vakagadzirira uye vakachengetedza; iyo inosanganisira zvose Duchamps naMichelangelos.
Kana iwe kazhinji uchishandisa data yakagadzirirwa, ndinotarisira kuti bhuku rino richakuratidza kukosha kwekuchengetedzwa kwedata. Uyewo, kana iwe kazhinji uchishandisa deta yekuchengetedza, ndinovimba kuti bhuku rino richakuratidza kukosha kwe data readymade. Pakupedzisira, uye zvinonyanya kukosha, ndinovimba kuti bhuku rino richakuratidza kukosha kwekubatanidza maitiro maviri aya. Somuenzaniso, Joshua Blumenstock nevamwe vaishanda navo vaiva chikamu cheDuchamp uye chikamu cheMichelangelo; ivo vakadzorera zvakare marekodhi ekufuratira (a readymade) uye vakazvigadzira dhevhisi yavo pachavo (muchengeti wevasungwa). Iko kuwirirana kwema-readymades uye maitiro ekuchengetedza maitiro ndiyo muenzaniso wauchaona mubhuku rino; inowanzoda kutsvaga mazano kubva mune zvemasayenzi nesayenzi yesayenzi, uye inowanzotungamirira kutsvakurudza kunonakidza.
Musoro wechipiri unotungamira nebhuku iri maitiro. Ini ndichakuratidza kuti vatsvakurudzi vangashandisa sei kukwanisa kwezera rejitori kuti vaite hutsva hunofadza uye hunokosha. Uye ini ndichakuratidza kuti vatsvakurudzi vanoshandisa sei mikana iyi vachasangana nematambudziko akaoma mazvisarudzo. Chitsauko 6 chichave chakazvipira zvakakwana kumitemo, asi ini ndinosanganisira maitiro mune mamwe mazvitsauko uye nokuti, mumakore ekudhindwa, mitemo ichava chikamu chekuwedzera chekutsvakurudza.
Basa reBluumenstock nevanoshanda navo rinoratidza zvakare. Kuva neruzivo rwemajeri ekudana mazita kubva kuvanhu vane mamiriyoni mashanu kunogadzira mikana yakaisvonaka yekutsvakurudza, asi kunowedzerawo mikana yekukuvara. Semuenzaniso, Jonathan Mayer uye vashandi pamwe chete navo (2016) vakaratidza kuti kunyange "anonymous" call rekodi (kureva, deta risina mazita uye adere) inogona kusanganiswa nehuruzhinji ruzivo ruzivo kuitira kuti ruzive vanhu chaivo munhoroondo uye kuti ipe ruzivo rwakanyanya pamusoro ivo, sehumwe hutano hwehutano. Kuti zvive pachena, Blumenstock nevamwe vashandi havana kuedza kuisa ruzivo rwakanyanya pamusoro pemunhu wese, asi izvi zvinoreva kuti zvakanga zvakaoma kuti vawane dhizimusi rekuda uye vakavamanikidza kuti vatore zvakachengetedzwa zvakachengetedza pavaiita tsvakurudzo yavo.
Pasi pemashoko ekudanwa mazita, kune kukonzera kukuru kunofamba kuburikidza nekutsvakurudza kwakawanda kwevanhu munharaunda yemadhigiri. Vanotsvakurudza-kazhinji kubudirana nemakambani nehurumende-vane simba rinowedzera pamusoro pehupenyu hwevatori vechikamu. Nesimba, ndinoreva kukwanisa kuita zvinhu kune vanhu vasina kubvumirwa kana kunyange kuziva. Semuenzaniso, vatsvakurudzi vanogona kuwona maitiro emamiriyoni evanhu, uye sezvandichazozvirondedzera gare gare, vatsvakurudzi vanogonawo kunyoresa mamiriyoni evanhu mukuedza kukuru. Uyezve, zvose izvi zvinogona kuitika pasina kubvumirwa kana kuziva vanhu vanobatanidzwa. Sezvo simba revanotsvakurudza riri kuwedzera, hakuna kumbove nekuwedzera kwakafanana mukujekesa pamusoro pekuti simba iroro rinofanira kushandiswa sei. Kutaura zvazviri, vatsvakurudzi vanofanira kusarudza kuti vangashandisa sei simba ravo kubva pamitemo isina kukwana uye inopesana, mitemo, nemitemo. Iko kusanganiswa kwesimba rine simba uye mirayiridzo yakajeka inogona kumanikidzika kunyange vanotsvakurudza zvinoreva zvakanaka kuti vatsungirire zvisarudzo zvakaoma.
Kana iwe kazhinji uchitarisa pamusoro pokuti kutsvakurudza kwehutano hwemagariro evanhu hunoita sei mikana mitsva, ndinotarisira kuti bhuku rino richakuratidza kuti mikana iyi inogadzirawo njodzi itsva. Uyewo, kana iwe unowanzoisa pfungwa pazviitiko izvi, ndinotarisira kuti bhuku rino richakubatsira iwe kuona mikana-mikana inogona kuda zvimwe zviitiko. Pakupedzisira, uye zvinonyanya kukosha, ndinovimba kuti bhuku rino richabatsira munhu wose kuti aenzanise zvisizvo nezvengozi uye mikana yakagadzirwa nehuwandu hwemashoko ehupfumi hwevanhu. Nekuwedzerwa kwesimba, panofanirawo kuuya kuwedzera mune mutoro.